ခံစားချက်တချို့ စုစည်းရာ: 2009
◊◊◊ ကျုပ်အသိတရား ◊◊◊
ချင်းစကားပုံတခုနဲ့နိုင်းပြရမယ်ဆိုရင့့် 
ဆိုသလိုမျိုးဖြစ်နေတာပဲ့။
စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ 
ရွှေမြန်မာပြည်ဟာ လုံးပါး ပါးလာပြီး
စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆိုးပဲ့။
နိုင်ငံရေးဟာပရိယာယ်များတယ့့် 
ဒါပေမယ့့် 
“ ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒတွေကို ရေရှည်တားဆီးထားနိုင်တဲ့
ကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိသေးဘူး ” ဆိုတာကိုသိတယ့်။
တိုင်းပြည်တခုသာယာဖို့အရေးက့ 
ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ့်။
နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံ ၇ ချက်နဲ့ 
ပြည်သူ့အင်အားနဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ပြစ်ရမှာပဲ့။
အဲ့ဒီလိုတော်လှန်ကြဖို့ဆို့ 
ရန်သူပြေးပေါက်ပိတ်ကာအညံ့ခံရမှာမလွဲ့။
တကယ်ဆိုရင်ကျနော်ဟာ့ 
အမှားတချို့ရှိခဲ့ရင်တော့ခွင့်လွှတ်ပါဗျို့။
အခွင့်အခါပေးခဲ့ရင်ပေါ့ 
ချစ်တဲ့အမိမြေဆီ့။
* ဒီမိုကရေစီရေးမုချအောင်ရမည် *
၂၉.၁၂.၂၀၀၉ ( အင်္ဂါနေ့ )
Posted by ဇာနည်မောင် at 2:21 PM 1 comment:
“ အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား ”
အေးချမ်းလှတဲ့ 
ယေရှုခရစ်တော်ကို မွေးဖွားခဲ့တယ့်။
ဧဒင် ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာပေါ့ 
ထာဝရအသက်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပေါ့။
မေတ္တာတော်ကြီးမားတဲ့ထာဝရဘုရာ့း့ 
ဒီကမ္ဘာမြေပေါ် လွှတ်ချခဲ့ပေါ့။
ခရစ်တော် ယေရှုကလည်းပဲ့ 
မေတ္တာတရားကြီးမားစွာ အသေခံပြခဲ့ပေါ့။
၂၅.၁၂.၂၀၀၉ ( သောကြာနေ့ )
Posted by ဇာနည်မောင် at 6:47 AM 1 comment:
“ ပြန်ဆုံမယ်အဖေ ”
တကိုယ်ရည်နေ့တွေက့ 
တည်ငြိမ်မှုတခုရနေပြီ အမေ့။
သားဘ၀မှာအမေနဲ့ပြန်ဆုံဖို့ကြိုးစားရင့်း့ 
သားကိုခွင့်လွှတ်ပါ့။
မဖြောင့်ဖြူးတဲ့ဘ၀လမ်းမှာ့ 
သေသေချာချာသားစဉ်းစားခဲ့တယ့်။
စနစ်ဆိုးအောက်မှာမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သာ့း့ 
မှန်နေတာကိုသားသိခဲ့ရတယ့်။
အရှုံးမပေးပါဘူး အမေ့ 
အဖေကောင်းကောင်းသိခဲ့ပါတယ့်။
အဖေပြောခဲ့သလိုပဲ့ 
အားတင်လို့စောင့်လိုက်အုံးပေါ့။
၃.၁၂.၂၀၀၉ ( ကြာသာပတေးနေ့ )
Posted by ဇာနည်မောင် at 2:19 PM 1 comment:
ဒီခရီးမှာတွေဝေနေရင်ရှုံးမှာပဲ့။
ဘ၀တခုနဲ့မမျှ့။
ပြည်သူတွေကို အဆိပ်မခပ်ကြ့။
သို့သော့့် 
မေလျှော့နေကြလေရဲ့။
အလှည့်စားခံနေရတဲ့ဘ၀့။
ကြိုးစားမြဲကြိုးစားနေလေရဲ့။
ဒီမှာ့ 
ကြောက်နေ ရှက်နေလို့ ၀န်မခံရဲ့ဘူမဟုတ်လား
ကဲ့ကဲ့ကဲ
ထုတ်သုံးစမ်းကြည့်လိုက်ပါလာ့း။
Posted by ဇာနည်မောင် at 1:35 PM 1 comment:
မနေသာလို ကျုပ်ပြောရအုံးမပေါ့။
ရှက့်ရှက့်ရှက်လှပါရဲ့။
ကျုပ်တို့ရွှေမြန်မာပြေ ( ပြည် )
၁၉၆၂ မတ်လ ၂ ရက်နေ့ကစ
ယနေ့အချိန်ထိပဲပါ့။
ဦးဆောင်မူတွေပေးကြပါလေ့။
ဒီမိုကရေစီအရေးကိုဆက်တောင်းဆိုရမှာပဲ့။
စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့မှာ
ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေဆဲပဲ့။
ဥပေက္ခာပြုထားလိုက်ကြစို့။
အာဏာရူးတို့ရဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ထောင်ချောက်ထဲ
တွေ့ဝေ့ကြွေ
ကဲ့ကဲ အသိတရားးရှိတဲ့လူသားတို့
ကိုယ်ပိုင်အသိတရားတွေနဲ့ ရဲသွေးမွေးကြစို့။
Posted by ဇာနည်မောင် at 3:23 PM 1 comment:
“ မနက်ဖြန်အရေး ”
သူတွေဟာလည်း ဒုနဲ့ဒေးပဲ့။
ပေးဆပ်နေကြရပြီပေါ့။
မှုန်ဝါးဝါးတော့မဖြစ်လေစေနဲ့။
အင်အားသတ္တိတွေမွေးကြရမှာပဲ့။
ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သွားရမှာ သဘာဝပဲ့။
Posted by ဇာနည်မောင် at 2:11 PM No comments:
“ ဘ၀ရဲ့တိုက်ပွဲ ”
လောကီသားတွေပဲဖြစ်ကြတယ့်။
နေထိုင်ကြရမှာအမှန့်။
အရိုင်းစိတ်တွေဝင်ကာတွေးထင်မိရဲ့။
ဘ၀တိုက်ပွဲဆီကိုပဲ ဆက်ချီတက်ရမှာပဲ့။
Posted by ဇာနည်မောင် at 12:16 AM No comments:
“ အနာဂတ်သစ်သို့လျှောက်ခြင်း ”
ဘ၀တခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ 
အမြဲတမ်းအဆင်သင့်။
မာရသွန်ဆန်တဲ့ဘ၀လမ်းမှာ့ 
ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားရမှာပဲ့။
သူငယ်ချင်းရေ့ 
မှုန်ဝါးဝါးတော့ဖြစ်မနေစေနဲ့။
Posted by ဇာနည်မောင် at 1:10 PM No comments:
“ စိတ်ထားကလေးပြုပြင်ရင်း ”
ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ 
တောင်းဆိုမိလိုက်နိုင်တယ့်။
ဦးနှောက်နဲ့နှလုံးသားမျှတအောင်ထားနေပါရက်နဲ့ 
သြော့်အစိုးမရတဲ့စိတ့်။
စိတ်ထားကလေးပြုပြင်လိုက်အုံးသူငယ်ချင်းရေ့ 
ဆယ်တန်း ( အထက်တန်း ) အောင် အောင်မထားတတ်ရင်
အဲ့ဒါ့အထက်တန်းကျောင်းမအောင်တဲ့
ငါ့ရဲ့သာမညအမြင့်။
တလောကလုံးစာငါတယောက်တည်းနဲ့ 
အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ့ငါ
ငါ့ခရီးတခုကို နှင်နေလေရဲ့။
Posted by ဇာနည်မောင် at 2:01 PM 1 comment:
“ နေ့သစ်များဆီသို့လျှောက်လှမ်းခြင်း ”
လှုပ်ရှားမှုရှိရင်ပြောင်းလဲမှုရှိလို့
တည်ငြိမ်စွာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေဆဲပဲ့ရဲရဲ့။
Posted by ဇာနည်မောင် at 1:53 PM No comments:
Posted by ဇာနည်မောင် at 1:43 PM No comments:
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့ အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း( Human Right Declaration) ကို ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၁၀)ရက်နေ့ တွင် စတင် ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့ပါတယ်။ လူ့ အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းကို အစွဲပြုပြီး နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလ(၁၀)ရက်နေ့ ဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့ အခွင့်အရေးနေ့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို လူ့ အခွင့်အရေး နဲ့ပတ်သက်ပြီး စာချူပ် တည်ရှိလာတာဟာ လူသားတိုင်းရဲ့ မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ရမယ့် ရှိကို ရှိရမယ့် အခွင့်အရေး တွေကို သိရှိနားလည်စေပြီး တောင်းဆိုတတ်လာစေဖို့ ပါ။ လူ့ အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းမှာ အချက်ပေါင်း (၃၀) ပါရှိပြီး ဘယ်နိုင်ငံမဆို ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ် စာတမ်းမှာ လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တာနဲ့လူ့ အခွင့်အရေး တွေကိုပါ သူ့ နိုင်ငံအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်းကို ပေးရမယ့် တာဝန် ရှိပါတယ်။ ဒီ လူ့ အခွင့်အရေး ကြေငြာ စာတမ်းကို ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ် စာတမ်းမှ တစ်ပါး အခြားမည်သည့် စာချူပ် သဘောတူညီချက်ကမှ လွှမ်းမိုး ပယ်ရှားလို့ မရပါဘူး။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေ အားလုံးမှာ ဒီ လူ့ အခွင့်အရေးတွေကို ကိုးကားထား ရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာဥပဒေ ဆိုင်ရာ စာချူပ်စာတမ်းများမှာလည်း ကိုးကားထားကြပါတယ်။ နိုင်ငံတွေရဲ့ ဖွဲ့စည်း ပုံအခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရာမှာလည်း လူ့ အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်းကို ကိုးကားကြရပါတယ်။ လူ့ အခွင့်အရေး အချက်တွေကို အဓိကအားဖြင့် Civil and Political Rights နဲ့Economics, Social and Culture Rights ဆိုပြီး ခွဲခြားထားပါတယ်။
Civil and Political Rights (နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ)
၂) တရားဥပဒေရှေ့ မှောက်တွင် တန်းတူညီမျှမှု
၃) တရားမျှတသော လူအများကြားနာခွင့်နှင့် အပြစ်မရှိကြောင်း အယူခံတင်ခွင့်
၄) လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားသွားလာခွင့်
၅) လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်၊စဉ်းစား၊ကိုးကွယ်ခွင့်
၆) လွတ်လပ်စွာ စုဝေးခွင့်နှင့် အဖွဲ့ အစည်းထူထောင်ခွင့်
၇) ကျွန်ပြုခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်
၈) ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ နှိပ်စက်အပြစ်ပေးမှုမျိူးဖြင့် ဆက်ဆံခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်
၉) တရားမဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ချူပ်နှောင်ခြင်းနှင့် ပြည်ပသို့ တိမ်းရှောင်မှုတို့ မှ ကင်းလွတ်ခွင့်တို့ဖြစ်ပြီး
Economics, Social and Cultural Rights ( စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ)
၄) မိမိတိုင်းပြည်ဧ။် အစိုးရအဖွဲ့ တွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခွင့်
၅) အလုပ်လုပ်ခွင့်၊ ညီမျှသော အလုပ်အတွက် ညီမျှသော လုပ်ခ ခံစားခွင့်
၇) လုံလောက်သော နေထိုင်မှုနှင့် ပညာသင်ကြားမှုအဆင့်အတန်းရရှိခွင့်
၈) အလုပ်သမား သမဂ္ဂ ဖွဲ့ စည်းခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့်
၉) အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်သောအခါ ခိုလှုံခွင့် တောင်းခံပိုင်ခွင့်စသဖြင့် အကြမ်းဖြင်း ခွဲခြားသိရှိနိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါ လူ့ အခွင့်အရေး အချက်များဟာ စံတစ်ခုအဖြစ်သာ ရှိပြီး ဥပဒေတစ်ခု အဖြစ် မဟုတ်ပါ။ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးဥပဒေ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အရာတွေ အပြည့်အစုံပါရှိတဲ့ စံတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဆိုပါ လူ့ အခွင့်အရေးကြေငြာစာ တမ်းကို လူ့အခွင့်အရေး ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတတ်မှုနှင့် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှုတို့ အတွက် နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ် ပြုထားရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်တော် များများက လက်ခံကျင့်သုံးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့ အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်း အပြည့်အစုံကိုတော့ http://www.un.org/en/documents/udhr/ မှာ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၁) လူတိုင်းလူတိုင်း လွတ်လပ်မှုရှိကြပြီး တန်းတူညီမျှ ဆက်ဆံသင့်သည်။
၂) အသားရောင်၊လိင်၊ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ဘာသာစကား ကွဲပြားသော်လည်း လူသားတို့ တွင် တန်းတူညီမှုရှိသည်။
၃) လူတိုင်းလူတိုင်း အသက်ရှင်ခွင့်ရှိပြီး လွတ်လပ်စွာနှင့် လုံခြုံစွာ နေထိုင်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၄) မည်သည့်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ကျွန်အဖြစ် ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ဆက်ဆံခြင်း မရှိစေရ။
၅) မည်သည့်တစ်ဦးတစ်ယောကိုမှ နှိပ်စက်ခြင်း၊ အနာတရဖြစ်စေခြင်း ပြုလုပ်ခွင့်မရှိ။
၆) လူတိုင်းလူတိုင်း တရားဥပဒေရှေ့ မှောက်တွင် တန်းတူညီမျှမှုရှိသည်။
၇) လူတိုင်းအတွက် တရားဥပဒေသည် ကျောသားရင်သားမခွဲဘဲ တပြေးညီ ဆက်ဆံရမည်။
၈) လူတိုင်းလူတိုင်း ၄င်းတို့ ဧ။် အခွင့်အရေးများကို လေးစားခြင်းမခံရသည့်အခါ ဥပဒေဧ။် အကူအညီ ကိုတောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၉) မည်သူ့ ကိုမှ မတရားဖမ်းဆီးခြင်း၊တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ခြင်း မပြုရ။
၁၀) လူတိုင်းလူတိုင်း တရားမျှတပြီး လူအများကြားနာနိုင်သော တရားစီရင်မှုကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၁၁) လူတစ်ယောက်အပေါ် အပြစ်ရှိသည်ဟု ခိုင်လုံသော စီရင်ချက်မချမခြင်း ထိုသူသည် အပြစ်မရှိဟုယူဆရမည်။
၁၂) မည်သူတဦးတစ်ယောက်မှ မကောင်းသောရည်ရွယ်ချက် ဖြင့် တခြားသူဧ။် အိမ်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း၊စာများဖောက်ဖက်ခြင်း၊ အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း လုပ်ခွင့်မရှိ။
၁၃) လူတိုင်းလူတိုင်း လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားသွားလာခွင့်ရှိသည်။
၁၄) မတရားအပြစ်ပေးခံရတော့မည့် အခြေအနေမျိူးရောက်နေလျှင် မည်သူမဆို အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်၍ ခိုလှုံခွင့် တောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၅) လူတိုင်းလူတိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသည်။ သူဧ။် ဆန္ဒအရ အခြားနိုင်ငံဧ။် နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုလည်း ခံယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၆) လူတိုင်းလူတိုင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားပိုင်ခွင့်နှင့် မိသားစုဘ၀ ထူထောင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၇) လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၈) လူတိုင်းလူတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်ရှိပြီး မိမိဆန္ဒရှိပါက အခြားဘာသာသို့ လည်းကူးပြောင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၁၉) လူတိုင်းလူတိုင်း မိမိတို့ ယူဆချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်တင်ပြခွင့်ရှိပြီးစ သတင်းများကိုရယူတင်ပြပိုင်ခွင့်လည်း ရှိသည်။
၂၀) လူတိုင်းလူတိုင်း ငြိမ်းချမ်းသောနည်းဖြင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့ အစည်းများသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၁) လူတိုင်း မိမိတိုင်းပြည်ဧ။် အစိုးရကို မိမိဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၂) လူတိုင်းလူတိုင်း လူမှုဘ၀ ဖူလုံရေးခံစားခွင့်ရှိကြပြီး မိမိတို့ ဧ။် အတတ်ပညာများ တိုးတတ်စေမည့်အခွင့်အလမ်းများကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၂၃) လူတိုင်းလူတိုင်းသည် စိတ်ချလုံခြုံသော လုပ်ငန်းခွင်တွင် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော လစာဖြင့်အလုပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရှိသည်။
၂၄) လူတိုင်းလူတိုင်းသည် အပန်းဖြေ အနားယူခွင့်ရှိသည်။
၂၅) လူတိုင်းလူတိုင်း လုံလောက်သော လူနေမှုအဆင့်အတန်းနှင့် ဖျားနာကပါက ဆေးကုသမှု ခံယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၆) လူတိုင်းလူတိုင်းသည် ပညာ သင်ကြားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၇) လူတိုင်းလူတိုင်း မိမိပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းဧ။် ယဉ်ကျေးမှုဘ၀တွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။
၂၈) လူတိုင်းလူတိုင်း ယခုဖော်ပြပါ အခွင့်အရေးများ ထွန်းကားစေရန်အတွက် လိုအပ်သော အချက်များကို လေးစားရမည်။
၂၉) လူတိုင်းသည် အခြားသူများဧ။် အခွင့်အရေးများ၊ သူတို့ ဧ။် ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းများ၊အများပိုင်ဆိုင်မှုများကို လေးစားရမည်။
၃၀) ယခု ကြေညာစာတမ်းပါ အချက်များကို မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ချိူးဖောက်ခြင်းမပြုရ။
ကိုးကား - HRDU (လူ့ အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတင်ဋ္ဌာန)Universal Declaration of Human Rights
Posted by ဇာနည်မောင် at 12:38 PM No comments:
Labels: ရည်မွန်ထိပ်ထား Blog မှ
“ အညတရတယောက်ရဲ့ခရီး ”
( ဗောဓိသတ္တထုံး* = မိမိကိုအန္တရာယ်ပြုတိုက်ခိုက်လာမည့်အရိပ်အယောင်ကို သိမြင်ရင် မိမိကလည်းသူ့ကို ပြန်လည်အန္တရာယ်ပြုတိုက်ခိုက်နိုင်သည့်နည်းလည်းများကို ကြိုပြထားရန် ဟောကြားခဲ့သည့် ဘုရားလောင်း ဗောဓိသတ္တ )
Posted by ဇာနည်မောင် at 2:17 PM No comments:
မသိသေးဘူးဆိုရင်လည့်း
တွေဝေနေလို့ မရဘူးပေါ့။
တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုယူပြီ့း
အဆိပ်တွေ့အဆိပ်တွေ မခပ်ကြနဲ့ပေါ့
ငါကြိုးစားနေဆဲပါပဲ့။
တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ကာ့ 
သမိုင်းမှာ မင်းပဲတရားခံဖြစ်မှာပေါ့။
လူ့ဘောင်လောကတခုမှာ့ 
မင်းတရားခံဖြစ်မှာပေါ့။
နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကလည့်း
တခါတလေမှာလည့်း
“ ငါတို့သည် အတိတ်ကိုလည်းမပြန်
ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်ပဲသွားမည် ” ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း
မင်းပဲတရားခံဖြစ်မှာပေါ့။
( ၂၀၀၈ ညောင်နှစ်ပင်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက် ပွဲကို မိုက်မဲစွာဝင် မည့်သူများအတွက် )
Posted by ဇာနည်မောင် at 2:32 PM 1 comment:
အမျိုးနော်တကယ်မြတ်ပါတဲ့ 
မြန်မာ့သမိုင်းမှာရာဇ၀င်တွင့်။
မြေနိမ့်သော်လည်း လှံစိုက်မခံတဲ့ဖြစ်ရပ်က့ 
ဗိုလ်မင်းရောင်က စခဲ့သပ့။
မျိုးဆက်တွေသာထပ်ကူးလာ့ 
ပြီးတော့အရှင်ကြီးကကျားထက်ဆိုးနေတော့
“ လာပါ့လာပါ ဆိုလည်းအောင်ဆန်း
သွားပါ့သွားပါ ဆိုလည်းအောင်ဆန်း ” ဆိုတဲ့စကားတောင်
မြန်မာ့သမိုင်းမှာကျန်ခဲ့သေးသပေါ့။
အခြေအနေမပေးလို့ 
သူကိုတိုင်ထုတ်ပြခွင့်ကြုံခဲ့ပြီပေါ့။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲပေါ့ 
ကျနော်တို့ခေတ်ရဲ့ ၁၃၅၀ ပြည့်အရေးတော်ပုံနောက်ပိုင်းမှာ
ဟို့းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဆုံးဖြတ်ထားလို့
နောက်တဖန်ထပ်မံသစ္စာဂါရ၀ပြုလိုက်ပါတယ် ဒေါ်စု့။
ဇာနည်မောင်( မတရားအမှုတွေနဲ့ စွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမြန်ဆုံးပြန်လည် လွတ်မြောက်ပါစေ့အသက် ၆၄ နှစ်ပြည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အတွက် ဂုဏ်ပြု ခြင်း သစ္စာကတိပေး ကဗျာ )
Posted by ဇာနည်မောင် at 2:13 PM No comments:
အမှန်လမ်းကိုပြပေးခဲ့သပ့။
သြော့်အာဏာကိုသေနတ်ပြောင်းက ထုတ်နေသူတွေ
အလွန့် အလွန်ရက်စက်လှရဲ့။
မကျေဘူးဟေ့မကျေဘူးကွ
ဒီနေ့မှာ ရီ ( ရယ် ) စရာ
သက်သေအထောက်အထား အမြောက်အများနဲ့။
အောင်ပွဲတွေဆီကိုဆက်ချီတက်နိုင်မှာအမှန်ပင့်။
Posted by ဇာနည်မောင် at 10:07 AM No comments:
ပျော်ရွှင်ခဲ့သောအတိတ်ကိုပြန်တွေ့း့ 
ပြီးတော့ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာပြီးရောဆိုတဲ့
တချို့တွေနေနိုင်လွန်းတယ့်။
ရေရှည်ဘ၀ရေးအတွက်လည်းပဲ့ 
လူတိုင်းသတ္တ၀ါတိုင်းပဲပေါ့
မပြောမဖြစ်လို့ပြောရအုံးမယ့့် 
ဆရာအောင်ဝေး ရေးခဲ့သလိုပဲပျားအုံခံစားမှုမျိုးနဲ့ပဲ တိုက်ရမယ်ပ
့တချို့တွေနေနိုင်လွန်းတယ့်။
ကျွန်ုပ်တို့တွေဟာ လောကီသားတွေပေမို့ 
အားလုံ့းအားလုံးကပဲ ကိုယ့်ထက်သာတဲ့သူကိုအားကျကြရှာတယ်
ဒါပေမယ့်လည့်းသူငယ်ချင်းရေ
တချို့တချို့သောခက်ခဲတဲ့အရာတွေအတွက်ကိုတော့
နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အရေးဟာ့ 
ကျုပ်ဟာလည့်းဒီမိုအရေးတိုက်ပွဲဝင်ရင်းနဲ့
( ၆ . ၇ . ၂၀၀၉ )မှတ်ချက် ( ၆ . ၇ . ၂၀၀၃ ရက်နေ့မှာ ဘ၀တပါးသို့ပြောင်းသွားသည့် ၁၃၀၀ ပြည့်ဖွား အမေဆုံးသွားသည့် ၅ နှစ်နဲ့ ၉ လပြည့် အမှတ်တရအမေပြောခဲ့ဖူးသည့် စကားတချို့ကို ထည့်ပြီးရေးထားပါသည်။ အမေကောင်းရာ သုဂတိလားပါစေ )
Posted by ဇာနည်မောင် at 9:42 AM No comments:
ပြောပြရအုံးမယ် သူငယ်ချင်းရေ့ 
ငါဟာ့ပညာရှိတယောက်မဟုတ်ခဲ့တာ
အများပြည်သူသိအောင်ဝေငှချင်ရဲ့။
တကယ်ဆို ငါဟာ့ 
ကြိုတင်အကြောင်းကြားပေးထားမှာပေါ့။
အရာဝတ္တုတိုင်းမှာက့ 
ဆွဲမတွေးပြစ်လိုက်အုံးနဲ့ပေါ့နော့်။
မိမိလိုချင်တာကို ရယူချင်လို့ကတော့ 
ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေဆဲ့။
သူငယ်ချင်းရေ ငါကလည်းပဲ့ 
မင်းအတွေးတွေလည်းပြောစမ်းပါ့။
Posted by ဇာနည်မောင် at 11:39 PM No comments:
ရည်မှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်တခုကို့ 
ဘ၀တခုအတွက်ခရီးဆက်နေကြတယ့်။
အဲ့ဒီဘ၀ခရီးတခုအတွက်ကတော့ 
ခရီးတခုဆုံးအောင်ဆက်သွားရအုံးမှာ့။
တခါတလေမှာအနာဂတ်တွေမှုန်ဝါးပေမယ့့် 
ဇွဲမာန်တွေကို ဥာဏ်သတိနဲ့ယှဉ်ကာ အားကိုတင်း
ဒီခရီးမှာရှုံးနိမ့်သူမဖြစ်စေနဲ့မင်း
ပန်းတိုင်ဆီကို ငါတို့ရွက်တွေလွှင့်။
Posted by ဇာနည်မောင် at 11:37 PM No comments:
မပြည့်စုံသေးတဲ့ 
မှားနေလေရော့ လား !!!
ပြုလုပ်တတ်တာ ငါ့အပြစ်လား !!!
ရိုးသားစွာဝေဖန် အကြံပေးကြပါ့။
အဖြေမှန်တခုလိုချင်တဲ့အတွက့့် 
ပြန်လည်သုံးသပ်ထားလိုက်အုံးပေါ့။
Posted by ဇာနည်မောင် at 11:36 PM No comments:
ငယ်စဉ်အရွယ့့် 
ကျနော့ရဲ့မွေးရာပါ သဘာဝ့။
ကြီးပြင်းလို့အရွယ်ရောက်လာလည့်း့ 
ဖျောက်ဖျက်ပြစ်လို့မရပါ့။
တခါတလေမှာလည်းပဲ့ 
ငါ့ရဲ့ သဘာဝတခုပဲ့။
ကံဆိုတာလူလုပ်သမျှဆိုတာကိုသိထားခဲ့လို့ 
ငါ့ဘ၀့ ငါ့ကံနဲ့
ပြီးတော့ဇာနည်မောင်ဆိုတဲ့
ငါ့ရဲ့မှန်ကန်တဲ့
ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ့။
Posted by ဇာနည်မောင် at 11:34 PM No comments:
အာဏာရှင်တွေ အရှက်မရှဗြောင်လိမ်မယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ
ကျနော်ရဲ့ ခံစားချက်ကဗျာတချို့ကိုအများဖတ်ရှုနိုင်ရန် Blog လုပ်ပြီးပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Facebook Thida သီတာ Account (1)
Forwarded Mail တခုမှ (1)
From drlunswe blog (1)
From Forwarded Mail (1)
ရည်မွန်ထိပ်ထား Blog မှ (1)
ရဲရင့်ငယ် website မှ (1)
ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည် ( ဘာသာပြန်သည် ) (1)
၈၈၈၈ အတိတ်ရဲ့ အထောက် အထား
စစ်အစိုးရ အာဏါအတွန့်ရှည်စေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက်
န.အ.ဖ စစ်အစိုးရရဲ့ အခြေခံဥပဒေ အလိုမရှိ
ရောက်လာကြောင်းသတင်းပါးခဲ့ကြပါ --- ။
သာမန်အညတရတယောက်ဖြစ်ပေမယ့် --- လောကကောင်းကျိုး --- တတ်စွမ်းသမျှသယ်ပိုးကူဖို့ --- ကိုယ်ယုံကြည်ရာခံစားချက်တချို့ကိုစာစီ --- လက်လှမ်းမှီသူတွေ --- အမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားတတ်ကာ --- စိတ်ခွန်အားတချို့ဖြစ်စေရေးအတွက် --- ကျုပ် အတွေးအခေါ်တချို့နဲ့ --- ခွန်အားပေးကူသွားမယ် - ။ ( ဇာနည်မောင် )
ကျနော်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက် ကဗျာများနှင့် သဘောကျနှစ်သက်သည့်စာ၊ကဗျာများ၊ဗီဒီယိုများကို အများဖတ်ရှုနိုင်ရန်မျှဝေဖော်ပြထားခြင်းမျှသာဖြစ်ပါသည်။ “ ဇာနည်မောင် ”